Jenụwarị, 2016 Akụziri CAD / GIS, innovations, Land Management
Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị akpali na Central America nwe degrees, na-atụle mkpa maka obodo ọchịchị na irreversible mkpa echiche ụgwọ ọzụzụ na ala management na a na-elekwasị anya otito mmadụ.
Abịa na ihe na-akpali, mgbe University José Cecilio del Valle ọhụrụ ya atụmatụ na ya ọhụụ na-entrepreneurial University of Honduras, na-akpali mmasị na ọnọdụ n'ebe virtualization fọrọ nke nta ya niile Filiks na outsourcing nke ọrụ na-agụnye na-achọta profaịlụ, nlekota oru, nduzi; na-akpali ihe nlereanya ma ọ bụrụ na anyị na-atụle na mkpa nke ulo mmuta bụ izi ihe, ichoputa ma-enwe mmetụta na mkpa nke ọha mmadụ.
The Master in Urban Design and Planning nwere uru nke ịbụ ndị a haziri n'etiti usoro nkwekọrịta mmekọrịta nke Mahadum a, yana Han-Institute for Urban Research nke Republic of Korea yana Soosung Engineering Company, otu n'ime ndị kasị ibu nke injinia na ije nke Korea. A kọwapụtara ya dị ka usoro mmemme postgraduate dị elu, ebumnuche iji me ka ọ dịkwuo mma na ịkwalite ọrụ ọkachamara iji nye azịza zuru oke maka imewe na atụmatụ obodo, ihe ndị bụ isi iji bulie mmepe nke mba ahụ, yana ndị ọrụ azụmaahịa, ngalaba ọha na-achọ. , mkpakọrịta obodo na imekọ ihe ọnụ nke mba niile, dabere na usoro na ụkpụrụ mba dị iche iche.
Ihe mgbaru ọsọ nke agbụrụ.
Train ọkachamara ike nke na ịchọputa mepere emepe nsogbu, ekpuchi akụ na ụba, na gburugburu ebe obibi, omenala na gbasara ohere Ọnọdụ, site n'itinye oru ngwá ọrụ na imewe ụkpụrụ na ike usoro iwu na teknuzu ndabere maka n'ichepụta na-eleru oru na anụ ahụ-gbasara ohere adọ iji na rụọ ndụ obodo.
Train ọkachamara na elu na-elekọta mmadụ na usoro ziri ezi nkwa, na otu nnyocha nke ihe na etinyeghi nke a obodo, na-enye ihe usoro maka idozi obodo mepere emepe na ụkpụrụ ụlọ nsogbu, ikwe redesign anụ ahụ ohere ji site nwoke na ugbu ndụ .
Etolite n'obodo ndị mepere emepe na mmepe maara nke ha na-elekọta ibu ọrụ, enwe ike ịzụlite oru lekwasịrị anya ịtụ ma ọ bụ na-eduzi uto nke obodo dị ka akpan akpan ọnọdụ nke gburugburu ebe obibi, na imewe ngwá iji hụ ọganihu nke mepere emepe oru ngo.
Amụma nke onye gụsịrị akwụkwọ.
The nna ukwu na Design na Urban Planning UJCV emepụta ọkachamara na ike ndabere ke Urban Design, Urban Planning, Management na Project Management of Urban na Regional Development, na ihe ọmụma nke methodological na nkà na ụzụ akụkụ na-ekwe ka ha kwesịrị ekwesị atụmatụ, na nzukọ, insurance mmejuputa na nchikota nke ego na ndị mmadụ izute ebumnobi, na-arụpụta na zaa mepere emepe, n'obodo ukwu-etiti peeji, obodo na mpaghara mmepe.
Ka ọ dị ugbu a, ogo nke nna ukwu jikọtara ikike ịme ihe na ihu na ihu site na 6 ruo 8 AM na Tegucigalpa, Honduras. Agbanyeghị na agaghị m eju m anya ma ọ bụrụ na n'oge na - adịghị anya ha ga - eme ya -nke bụ ugbu a dị ka ihe mgbagwoju anya- obughi naani nihi na nka aghaghi iguzoghachite, kama nihi na otutu klas di ugbua site na ihe ha nwere.
Oge ogologo oge bụ ọnwa 20 (Otu ọnwa 8 ọnwa), oge a na-ewe ihe 12 wee malite ịmepụta usoro isiokwu.
A na-ekesa ọdịnaya nke ihe dị na oghere anọ, nke dịka ị nwere ike ịhụ, ọ bụghị nanị na ị na-elekwasị anya na nkà mmụta omenala site na nhazi oge na-aga Engine Engineers na Architects; ndị nna ukwu nwere ike itinye ndị ọkachamara nke ebe a na-elekọta mmadụ ka ọ na-eme na mba ndị ọzọ.
1. Ogwe njikwa
Ntuzi na Mgbalị Dị Nso
Okwu Mmalite nke Management Project
Ndị na-ebi ndụ n'obodo
Usoro Ụlọ Ọrụ Geographic
Nchịkọta Obiọma na Social nke Ederede Urban
Ntugharị nke obodo
Akụrụngwa na ihe eji eme obodo
Ụkpụrụ, Iwu, na Nkwekọrịta Nkwekọrịta
4. Nhazi atụmatụ.
Gburugburu Ebe Ewu Obodo
Nlekọta na Management nke Projects Housing Housing
N'ikpeazụ, nzukọ ọmụmụ ihe ọmụmụ ahụ na-ewere ọnọdụ. Otu akụkụ na-adọta uche m na nke ahụ yiri ihe ịga nke ọma nye m bụ na ụmụ akwụkwọ ahụ na-ewere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ klaasị niile n'otu ọrụ ahụ, nke ha gwụchara n'oge ogo dị iche iche. Na njedebe, ngosipụta nke akwụkwọ akụkọ ahụ na-apụta karịa ka ọ dịkwa mfe kamakwa iji ihe ọmụma abụghị ihe na-enweghị nkwa.
Ihe profaịlụ nke ndị ọkachamara na-ahụ maka klaasị abụghị naanị na-atụ aro ọzụzụ na njiri mara nke mba ndị mepere emepe, kamakwa usoro ịmụ na ịbanye na usoro, njikwa na azụmaahịa. Dị ka ihe atụ, usoro "ụlọ obibi mmekọrịta" enweghị ihe jikọrọ ya na obere ụlọ ndị nwere obere ala nke ejiri agbụ gọọmentị rụọ, kama ọ bụ echiche nke iji oghere eme ihe n'ụzọ nwere ọkwa dị iche iche nke ọnọdụ akụ na ụba.
Echere m na nke a mepụtara nke ọma -ewezuga ọkwa ụzụ- O nwere ike ime ka ndi okacha mara ihe di nkpa na mpaghara a, dika mkparita uka, nyefee echiche ma tinye uche ya na ikwusi ike na Territorial Plan, nke bu ihe oru nwere ike inwe ntinye aka di nma maka onye isi obodo poemiki abaghị uru nye gị na nke ahụ, chọrọ ntuziaka maka nlekota na ime mkpebi kwa afọ mgbe ị ga-edozichara usoro mmefu ego gị na itinye ego.
UJCV - Mazi na Honduras ma ọ bụ na mail gụsịrị akwụkwọ (na) ujcv.edu.hn
Previous Post«Previous Ndị ọzọ iji jiri QGIS na ekwentị mkpanaaka na iOS
Next Post Bubata nhazi site na Excel na QGIS ma mepụta PolygonsNext »
Otu azịza nye "Master in Urban Design and Planning [UJCV]"
Rosa Pinto kwuru, sị:
October, 2016 na
Ukwu! Ọzụzụ ndị ọkachamara ọhụrụ maka ọrụ mmepe obodo na ndị nnabata pụrụ iche dị nnọọ aka maka mpaghara ahụ, nke na-agbake ugbu a.